Mancane amathuba okuthi uZuma akhishwe – Ucwaningo | isiZulu
Mancane amathuba okuthi uZuma akhishwe – Ucwaningo
BUKA: Kukhuzwa amanyala ngomdwebo omusha ongoMengameli Zuma noMandela
UShivambu uzoqondiswa izigwegwe ngokuthi ‘uZuma uzonibulala’
BUKA: Sizomasha uZuma aze ahambe - Maimane
Johannesburg – Mancane amathuba okuthi uMengameli Jacob Zuma akhishwe esikhundleni yisiShayamthetho sikazwelonke, kodwa maningi amathuba okuthi aphume ngokuthi kuxoxiswane.
Isikhungo esenza ucwaningo, iBMI Research, nesiyingxenye yeFitch Group Company, sikhiphe ucwaningo olumayelana nomthelela wokuhlelwa kabusha kweKhabhinethi esimweni somnotho.
Ukuhlelwa kabusha kweKhabhinethi, okwenzeka ngoMashi, kwaholela ekutheni uMengameli Zuma axoshe obenguNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan, wafaka uMalusi Gigaba esikhaleni sakhe.
Lokhu kuhlelwa kabusha kweKhabhinethi kwaholela ekutheni kube nemibhikisho, nalapho kwakuhlatshwa khona ikhwelo lokuthi uMengameli Zuma aphume aphele esikhundleni.
OLUNYE UDABA: Inqwaba yongqongqoshe abazosula uma uZuma exosha uGordhan
Kodwa-ke ucwaningo luveza ukuthi uZuma “unomthelela owanele” ngaphakathi ku-ANC ukuvimbela noma ngabe yiziphi izinselelo ngesikhundla sakhe.
“Noma ngabe yisiphi isinyathelo sokukhipha uZuma esiShayamthetho sizodinga amavoti e-ANC, kodwa ukuqina kukaZuma ngaphakathi ezinhlakeni zamandla ze-ANC kunciphisa ubungozi bokuthi iqembu lizovota liphikisana naye,” lo mbiko uchaze kanjalo.
Zintathu izindlela uZuma angakhishwa ngazo, ngokubeka kwalo mbiko.
Eyokuqala isiphakamiso sokungamethembi, nalapho kudingeka khona amavoti angu-201. Mancane-ke nokho amathuba okuthi lokhu kuphumelele njengoba esikhathini esingaphambili amanye amaqembu amancane ayaye avote eseka uZuma, kanti futhi ukuze le mizamo iphumelele kudingeka okungenani amaLungu ePhalamende e-ANC angu-60 azovota ephikisana noZuma.
Indlela yesibili ukuthi akhishwe ngevoti nalapho kudingeka amavoti angu-267. “Mancane kakhulu-ke amathuba okuthi lokhu kwenzeke” njengoba kudingeka amaLungu amaningi kakhulu e-ANC ukuthi avotele ukukhipha uZuma.
Indlela yokugcina ukuthi uMengameli akhishwe esikhundleni yiNational Executive Committee (NEC) yeqembu elibusayo, i-ANC.
Lesi yisinqumo esithathwa ngokuvumelana, okunokuthi kuvotwe. Mancane-ke amathuba okuthi nalokhu kwenzeke njengoba amalungu angaphezu kwesigamu eNEC ehambisana noZuma.